Khin Ma Ma Myo's Blog: မြို့ပြဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး
တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (urban development) က အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလို မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြို့ပြဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု (urban poverty) လျှော့ချနိုင်ရေးကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာမှာ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ မြို့ပြဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများဘက်မှ citizen driven actions များ လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်သလို၊ နိုင်ငံတော်ဘက်ကလဲ မြို့ပြဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး မူဝါဒများ ထိထိ ရောက်ရောက် ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခင်မမမျိုး (၃၁၊ ၇၊ ၂၀၁၁)
Baker, J. & Schuler, N. (2004) Analysing Urban Poverty: A summary of methods and approaches, World Bank Policy Research Working Paper 3399, World Bank, Washington DC.
Baharoglu, D. & Kessides, C. (2002) “Urban Poverty” in Klugman (ed.) A sourcebook for poverty reduction strategies: Volume 2: Macroeconomic and sectoral approaches, World Bank, Washington DC.
Urban Poverty and the Working Poor: FACING THE CHALLENGES OF URBANIZATION AND URBAN POVERTY IN ASIA AND THE PACIFIC, Committee on Poverty Reduction, Economic and Social Commission on Asia and Pacific, Fourth Session, 12-14 December 2007, Bangkok